स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page 10 of 113 - Koshi Online
विराटनगर, असोज २६ संसारमा अनेकौ किसिमका रोग र भाइरसले ठाउँ ओगटी रहेको बेला अहिले एउटा नयाँ किसिमको रोग फेला परेको छ । भनिन्छ, मानब शरीर एउटा रहस्यले भरिएको प्राणी । शरीरभित्रका अनौठा कुराले हामीलाई तीनछक्क पार्छन् । अहिले हालसालै…
यी चार समयमा चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
२५ आश्विन २०७४, बुधबार १६:२७
विराटनगर, असोज २५ चिया हाम्रो बिहानीको प्रथम कम्प्लिमेन्ट हो । चियाले हाम्रो शरीरमा एक किसिमको उर्जा र स्फूर्ति भरिदिने गर्छ । घरमा आउने पाहुनाहरुको स्वागत-सत्कार चिया/कफि बिना अधुरो लाग्छ। चियासँग मानिसको अति नै लगाव छ। तर धेरै जसोलाई…
यी दुइ कारणले पर्छ छालामा चाउरी
२५ आश्विन २०७४, बुधबार १६:१६
विराटनगर, २५ छालाको चाउरीपना हटाउन विभिन्न झोल औषधि, भिटामिन र लोसनको प्रयोग गर्न पछि पर्दैनौं । कतिले त शल्यक्रिया नै गर्छन्। यी सबैले चाउरीपना लुकाउन तत्कालका लागि केही मात्रामा सघाए पनि गहिराइसम्म गएर समस्या निर्मूल पार्न सक्दैनन् ।…
ग्यास्ट्रिक भयो ? यसो गर्नुस् ग्यास्ट्रिक एकैछिनमा चैट
२५ आश्विन २०७४, बुधबार १३:४५
विराटनगर, असोज २५ मेडिकल भाषामा ‘ग्यास्ट्राइटिस’ भनेर चिनिने यो रोगलाई बोलीचालीको भाषामा ‘ग्यास्ट्रिक’ भनिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार खाएका खाना पचाउन शरीरभित्र विभिन्न प्रकारका पाचन रस हुन्छन् । खाना खाँदा ‘हाइड्रोक्लोरिक एसिड’ नामक एक…
कुकुरले टोक्यो ? यस्तो ५ प्राथमिक उपचार अपनाउदा हुनेछ फाइदा
२४ आश्विन २०७४, मंगलवार १६:२२
विराटनगर, असोज २४ जनावरको शरीरमा एउटा खतरनाक किसिमको भाइरस हुनेगर्दछ । विशेष, जंगली जनावरमा यस्तो भाइरसको मात्र ज्यादा देखिने गर्छ । यदि यो भाइरस भएको जनावले कुनै व्यक्तिलाई टोक्यो भने त्यसको र्यालमार्फत उक्त व्यक्तिलाई सर्ने गर्दछ ।…
ब्लड-प्रेसरको रोग छ ? यस्ता खानेकुरा खादा फाईदै-फाइदा
विराटनगर, असोज २४ मीठो–मीठो मात्र खानुपर्ने, मांसाहारी खानामै जोड दिने, रक्सी, सूर्ती आदि नशाको सेवन गर्नुपर्ने, ज्यादातर समय मानसिक तनावमा रहनुपर्ने वाध्यता, शारिरिक व्यायामको कमी आदिले पनि ब्लडप्रेसरको समस्या थपिदै गएको देखिन्छ।…
यसरी हुनेगर्छ कपाल स्ट्रेट : जानिराखौं
२४ आश्विन २०७४, मंगलवार १५:२०
विराटनगर, असोज २४ कहिलेकाहीँ एउटै व्यक्तिमा पनि विभिन्न गुणस्तरको कपाल हुन सक्छ । सबै क्वालिटी एउटै कपालमा पनि हुन सक्छ । यस्तो कपाल स्ट्रेट गर्दा बढी होसियार हुनुपर्छ । आवश्यकभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गर्न हुन्न । कपालले आफ्नो गुण…
दुधमा मह मिसाएर खादा हुन्छ यस्तो फाइदा
२४ आश्विन २०७४, मंगलवार १५:०३
विराटनगर, असोज २४ मौरीहरूले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति -जडिबुटीसहित)हरूको फूलमा भएको रसलाई सङ्कलन गरी तयार पार्ने तरल वस्तुलाई मह भनिन्छ । आयुर्वेदिक औषधीय गुण भएको 'खाए पनि ठीक लाए पनि ठीक' बहुउपयोगी वस्तु महलाई यस्तै धेरै गुणहरूको…
दिमाग तेज बनाउनु छ ? यस्तो कुराहरु खानुस्
२३ आश्विन २०७४, सोमबार १५:४०
विराटनगर, असोज २३ उमेर बढ्दै जाँदा दिमागका कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जान्छन् र स्मरणशक्तिमा ह्रास आउँछ । तर ब्रेन फूड खानुभयो भने दिमागलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ । केहि खानेकुराको आफ्नै-आफ्नै गुण हुनेगर्छ। स्वस्थ जीवनका लागि मस्तिष्क स्वस्थ हुनु…
यो जुसले बढाउछ आँखाको ज्योति : आजैबाट खाने गर्नुस्
२३ आश्विन २०७४, सोमबार १४:३४
विराटनगर, असोज २३ धुलो धुवा अनि लगातर टिभी र ल्यापटपमा बस्ने बानीले गर्दा हाम्रो आँखामा नकारात्मक प्रभाब पर्दै गएको छ । आखामा डार्क सर्कल बस्ने, आँखा धमिलो देखिने, आँखाबाट लगातार पनि खस्ने जस्ता कुराले नराम्ररीसंग पिरोली रहेको छ । आजकल…